Ny cones tsara indrindra ho an'ny alika sy ny hafa | Dogs World
Ny cones alika dia fitaovana tena ilaina sy ilaina rehefa avy nodidiana ny alikanao, nefa manahirana sy tsy mahazo aina ho azy koa izy ireo satria, na dia manakana azy tsy hanaikitra sy hikasika ny ratra aza izy ireo, dia manakana azy tsy hihinana sy hisotro ara-dalàna.
Noho izany, Ato amin`ity lahatsoratra ity momba ny tsara indrindra cones ho an`ny alika dia tsy hiresaka momba ny tsara indrindra cones hitanao eny an-tsena, fa koa safidy hafa, tena mahagaga, izay afaka manampy anao handalo ity zava-pisotro ratsy ity ary hanamora ny fiainan'ny biby fiompinao. Ankoatra izany, manoro hevitra anao koa izahay hamaky ity lahatsoratra ity momba ny ny fomba fitsaboana ny tahotra ny vet.
SUQ Collar ho an'ny ...
Croci C5AR0220, Rojo...
1 Ny cone tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Vozon'akanjo Elizabethan misy velcro
1.2 Inflatable vozon'akanjoko
1.3 Akanjo fanarenana amin'ny mainty
1.4 Akanjo fanarenana
1.5 Cone plastika klasika
1.6 Inflatable cone misy tady azo amboarina
1.7 Tena malefaka vozon`akanjoko
2 Rahoviana ianao no tsy maintsy mitondra ny alikako miaraka aminao?
3 Karazana sy safidy hafa amin'ny cones
3.1 Cone plastika
3.2 Cones malefaka
3.3 Inflatable cone
3.4 Akanjo fanarenana
4 Aiza no hividianana cones alika
Ny cone tsara indrindra ho an'ny alika
Vozon'akanjo Elizabethan misy velcro
Supet Cones an'ny ...
Iray amin'ireo cones alika tsara indrindra amin'ny Amazon ity modely mahazatra vita amin'ny PVC sy velcro ity. Tena mora ny mitafy azy, satria eo amin'ny vozon'ilay biby ihany no tsy maintsy apetrakao (tadidio ny hamela toerana ampy hifohazany). Ity modely ity dia tena mahatohitra ary afaka misafidy habe maromaro ianao, mba hahitana izay mety indrindra amin'ny alikanao, araho ny fandrefesana eo amin'ny latabatra.
Misy fanehoan-kevitra manasongadina fa izany no izy somary malemy sy fohy ho an'ny alika sasany. Ny hafa kosa dia manantitrantitra fa tena mahazo aina izy io ary tena ilaina ny lamba manarona ny sisiny mba tsy handratra ny alika.
Rojo YAMI ...
Raha mila zavatra hafa sy mahazo aina kokoa ho an'ny alikanao ianao, ny cone inflatable dia safidy tsara. Izy io dia rakotra lamba malefaka ary, ankoatra izany, dia manamora ny fihetsiky ny alikanao, satria mamela azy hihinana sy hisotro tsara. Fanampin'izany, dia mifofotra sy mikoriana mora foana izy io, izay mitsitsy toerana rehefa fitahirizana. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa ity modely ity dia tsy mety amin'ny karazana alika rehetra, satria ireo manana tongotra lava sy oroka (toy ny Dobermans, Dalmatians ...) dia afaka mankany amin'ny faritra tianao hialana.
Akanjo fanarenana amin'ny mainty
Suit Recovery Suit...
Safidy iray hafa tena mahaliana ho an'ny tompon'ny alika izay sahiran-tsaina indrindra amin'ny cones. Ny akanjo fanarenana toy izany dia miaro ny faritra, na ratra izany, na zaitra, na fehiloha, tsy misy fetrany ny fihetsiky ny alika. Fidio tsara ny habeny mba tsy hanery na hihoatra ny palitao rehefa manao ny akanjo. Ity modely ity dia vita amin'ny landihazo sy lycra, ka mahatonga azy elastika sy mifoka rivotra amin'ny fotoana iray ihany.
Fomba hafa amin'ny cone ho an'ny alika, mitovy amin'ny vokatra teo aloha. Araka ny voalazanay dia manamora ny fivezivezen'ny alika izany. Ankoatra izany, rehefa mandeha ny alika, dia tsy ho afaka hihinana sy hisotro mora fotsiny izy, fa hanamaivana ny tenany ihany koa, satria mibaribary ny lamosiny. Ity modely ity dia misy bokotra ary misy faribolana izay tsy maintsy tapahanao raha lahy ny alikanao.
Cone plastika klasika
Ity cone ity dia mety, na dia tsy mila zavatra hafa aza isika indraindray. Tena mora izany (manodidina ny € 7), tena mora ny mitafy ary misy cone plastika mipetaka amin'ny vozon'ilay biby misy velcro.. Ny sisiny dia rakotra lamba mba tsy hikorontana. Misy fanamarihana milaza fa, raha somary lava orona ilay alika, dia tsy manakana azy tsy ho tonga any amin’ny faritra tsy tiantsika ilay kesika.
Inflatable cone misy tady azo amboarina
Rojo Nasjac ...
Ny vozon'akanjo tsara iray hafa dia ity modely ity izay tsy vitan'ny hoe ahitana singa mitovy amin'ny rojo hafa mitovy amin'izany, toy ny lamba malefaka izay manarona azy na ny fanamorana ny fitehirizana azy, fa koa a tady azo ampiharina amin`ny fanitsiana ny vozon`akanjoko amin`ny lohan`ny alika. Misy habe roa izy io, M sy L, ary azo diovina mora foana satria azonao atao ny manala ny fonon'ny zipper.
Tena malefaka vozon`akanjoko
James sy Steel All Four ...
Farany, angamba ny vozon'akanjo mampahazo aina indrindra ao amin'ny lisitra (afa-tsy amin'ny akanjo fanarenana, mazava ho azy) dia ity kônôma miloko ity. dia vita amin'ny nylon, miraikitra amin'ny vozon'akanjo ary manana ny mampiavaka azy fa azo ampidinina tanteraka. Noho izy malefaka, ny alika dia afaka matory na mihinana sy misotro tsara ao, satria simba izy, na dia tsy maintsy hiezaka ny hametraka azy indray any aoriana.
Rahoviana ianao no tsy maintsy mitondra ny alikako miaraka aminao?
Manao cone, mazava ho azy tsy antony aesthetique na kisendrasendra io fa tsy maintsy asehon'ny veterinera. Amin'ny ankapobeny, ny alika dia tsy maintsy manao cone amin'ny tranga roa:
Voalohany indrindra, raha efa nodidiana izy ireo. Ny cone dia manakana ny alika tsy hikasika ny ratra na hisintona na hilelaka ny zaitra. Noho izany dia sitrana tsara kokoa sy haingana kokoa ny ratra ary mihena ny mety hisian'ny aretina.
Faharoa, mety hilaza aminao izany koa ny veterinera Ny alikanao dia tsy maintsy manao cone raha toa ka manaraka fitsaboana izay tsy maintsy ialana amin'ny fikarohana izy na manaikitra amin'ny faritra iray manokana.
Hitanao izany Ireo dia tranga roa manan-danja lehibe amin'ny fahasalaman'ny alikanao, noho izany dia tena ilaina ny fampiharana marina azy mba hahatanteraka tsara ny asany io fitaovana tsy mahafinaritra io.
Ankoatra ny fampiasana veterinera, ny cone dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra hafa, ohatra, rehefa mitondra azy any amin'ny mpanao volo, mba hisorohana azy ireo tsy hanaikitra zavatra tsy tiantsika na hanodinkodina azy tsy misy tahotra, na dia tsy maintsy tsaroanao fa tsy mahazo aina mihitsy, noho izany dia tsy ilaina ny mampiasa azy io tsy an-kanavaka.
Karazana sy safidy hafa amin'ny cones
Ny cones ho an'ny alika dia tsy ny cone mandritra ny androm-piainany ihany no hitanao any amin'ny vet. Amin'izao fotoana izao, misy modely sy safidy isan-karazany izay mety mahazo aina kokoa ho an'ny alikanao, araka ny toetrany sy ny fanaony.
Ny cone mahazatra matetika plastika mazava, izay afaka mividy na inona na inona vet. Tena tsy mahazo aina izy io, ankoatra izany, dia mampitombo ny feo sy manodinkodina azy, izay misy fiantraikany be dia be amin'ny fandrenesan'ny alikanao, na mametra ny sahan'ny fahitany, ka mety ho sahiran-tsaina izy amin'ny fitafy azy, farafaharatsiny mandra-pahazatra azy. Ambonin'izany dia manasarotra ny fihetsehanao izany, ka sarotra aminao ny mihinana na misotro.
Cones malefaka Izy ireo dia safidy tsara ho an'ny plastika mafy, satria manamora ny fidirana amin'ny sakafo sy ny fisotroana ny alika. Ankoatra izany, dia mahazo aina kokoa ny mitafy. Na izany aza, misy olana ihany koa izy ireo. Ohatra, indrindra satria vita amin'ny fitaovana malefaka kokoa, indraindray ity karazana cone ity dia very ny endriny, izay ahafahan'ny alika miverina amin'ny ratra.
Izy ireo dia tena mampahatsiahy ny inflatable cushions mahazatra amin'ny torimaso amin'ny fiaramanidina. matetika dia rakotra lamba mba hampahazo aina kokoa ny fitafy. Toy ny cones malefaka dia manamora kokoa ny fihinanana sy ny fisotroana ny alika, na dia ny fahapotehan'ny olana lehibe misy azy aza: mora ho an'ny alika ny manindrona azy tsy nahy sy mirefodrefotra, ka mila mitandrina manokana ianao mba tsy hikorontana izany. mitranga.
Ny safidy tanteraka amin'ny cones dia akanjo fanarenana, izay Anisan'izany indrindra izy ireo, amin'ny akanjo apetaka amin'ny alika mba hisorohana azy tsy ho tonga any amin'ny ratra.. Tena mahazo aina izy ireo satria mamela malalaka tanteraka ny hetsika, na dia mety ho sahiran-tsaina aza ny alikanao raha tsy zatra mitafy akanjo izy. Ataovy izay hividianana habe tsy lehibe loatra na kely loatra.
Aiza no hividianana cones alika
Na dia tsy lahatsoratra matetika aza izy ireo, soa ihany Afaka mahita cones ho an'ny alika mora foana isika, na dia ho toerana manokana kokoa na latsaka. Anisan'ny mahazatra indrindra, ohatra:
Amazon, Mpanjakan'ny zavatra tsy misy kilema, dia mitondra anao ny cone tianao ho eo am-baravaran'ny tranonao raha toa ianao ka nanao ny safidy Prime. Ankoatra izany, dia manana karazany isan-karazany, toy ny inflatables, lasibatra na ny fanarenana suits.
ny fivarotana manam-pahaizana manokana toa an'i TiendaAnimal na Kiwoko dia manana cones vitsivitsy ao anaty tahiry. Na dia tsy manana karazany betsaka toy ny Amazon aza izy ireo, dia tena tsara ny kalitaony ary misy amin'ny habe maromaro ihany koa izy ireo mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka amin'ny alikanao.
Farany, ny mpitsabo biby Izy ireo no toerana mahazatra indrindra hividianana cones alika. Na dia izy ireo aza no manana modely vitsy kokoa, tsy isalasalana fa izy ireo no afaka manome torohevitra manokana ho anao sy ny biby fiompinao.
Ny cones ho an'ny alika dia manana zavatra tsara iray ihany: zatra maka andro vitsivitsy izy ireo. Na izany aza, zava-dehibe ny mandinika ny fampiononana ny biby fiompinay, koa manantena izahay fa nanampy anao tamin'ity safidy ity. Lazao anay, efa tsy maintsy nitafy ny alikanao ve ny alikanao? Ahoana ny hevitrao momba ireo modely samihafa ireo? Iza no mety indrindra amin'ny biby fiompinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny cones tsara indrindra ho an'ny alika sy ny hafa